सुनको मूल्यले नेपाली बजारमा बनायो नयाँ कीर्तिमान, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? — Sanchar Kendra
सुनको मूल्यले नेपाली बजारमा बनायो नयाँ कीर्तिमान, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौँ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुनको भाउ इतिहासकै सबैभन्दा उच्च मूल्यमा पुगेको हो।
महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २५ सय रूपैयाँले बढेर १ लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै तेजावी सुनको भाउ पनि प्रतितोला १ लाख ५ हजार पुगेको छ।
बुधबार चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला ४० रूपैयाँले बढेको छ। चाँदी प्रतितोला १४५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
मंगलबार तेजावी सुन १ लाख २ हजार ५ सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै असली चाँदी १२०९ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो। अहिले रूस र युक्रेनबीच चलिरहेको द्वन्द्वका कारण विश्वकै बजार प्रभावित भएको छ। डलर, पेट्रोलियम पदार्थदेखि सुनसम्मको भाउ बढेको बढ्यै छ। यी तिनै वस्तुको भाउ एकअर्काको भाउमा निर्भर हुन्छ।
विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले सुनको भाउ अझै बढ्न सक्ने नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य बताउँछन्।
उनका अनुसार खानीबाट सुन प्रशोधन गर्न अत्यधिक मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुन्छ। त्यसैले पेट्रोलयमको भाउ बढ्दा सुन प्रशोधन खर्च बढ्छ अनि भाउ पनि। ‘सुनको मूल्य घट्न पेट्रोलियम पदार्थको पनि मूल्य घट्न पर्छ,’ उनले भने।
पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने ठूला देशमध्ये रूस तेस्रो हो। युक्रेन आक्रमणमा लागेकाले रूसमा तेल उत्पादन कम भएको छ। जति उत्पादन भएको छ, त्यो पनि अन्य मुलुकलाई नबेची आक्रमणमा प्रयोग गर्न सञ्चिति गरेको छ। यसकारण पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्ने कुनै संकेत देखिएको छैन।
शाक्यका अनुसार ठूला र बलिया देश लडाइँमा लागेपछि जहीँकहीँका उद्योगी तथा लगानीकर्ताको मनोबल गिर्छ। त्यसैले उनीहरू आफूसँग भएको पैसा उद्योगधन्दामा लगानी गर्दैनन्। बरू सुनजस्ता सम्पत्ति किनेर राख्छन्। त्यसले गर्दा बजारमा सुनको माग अझै बढ्छ। माग धेरै हुँदा मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढ्न जान्छ।
‘व्यवसायीहरूले लगानी सुरक्षित गर्ने पहिलो कदम भनेकै सुनमा लगानी हो,’ शाक्यले भने। लडाइँको समस्या समाधान नभए सुनको भाउ अझै उक्लिने शाक्य बताउँछन्। अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने आगामी शुक्रबारसम्म सुन तोलाको एक लाख पाँच हजारसम्म पुग्ने उनको अनुमान छ। अनि लडाइँ लम्बिए यो महिनाको अन्त्यसम्ममा एक लाख १५ हजारसम्म पुग्न सक्छ।
‘सुन धेरै बढ्यो भने एउटा बिन्दुमा गएर त्यो रोकिने गरेको विगतको ट्रेन्ड देखेका छौं। त्योभन्दा पछिको आकलन अहिले गर्न सकिँदैन,’ उनले भने। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरू गरेयता सुनको मूल्य चार हजार रूपैयाँ बढिसकेको छ।
फागुन १२ गते अर्थात् फेब्रुअरी २४ देखि रूसले युक्रेन माथि सैन्य हमला गरेको थियो। उक्त दिन नेपाली बजारमा सुन प्रतितोला ९९ हजार रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो। हिजो मंगलबार सुन प्रतितोला एक लाख तीन हजारमा कारोबार भएको थियो। सुनको भाउ आइतबारदेखि एक लाख नाघेको हो।
एकातिर सुनको भाउ चर्किरहेको छ, अर्कातिर आयातमा कडाइ भएको छ।तत्काल साविकको बजारबाहेक शुभकार्यका लागि सुन किन्ने कम होलान्। राष्ट्र बैंकको नीतिले देखिनेगरीको प्रभाव नपार्न सक्छ। तर वैशाखमा बिहेका कारण पनि माग बढ्छ। त्यो बेलासम्म रूस-युक्रेनको द्वन्द्व प्रभाव र राष्ट्र बैंकको आयात कोटा अहिलेकै जस्तो भए सुनको माग र भाउ दुवै चर्को हुने सम्भावना देखिन्छ।